I-NordVPN Black Friday 2020 - 83% OFF (Amadili amahle) - Izipesheli
Ngabe ufuna ukuthenga insiza egcwele ye-VPN kulokhu? Yebo, i-intanethi iba yindawo eyingozi, futhi i-VPN ingaba isivikelo esihle kakhulu. Kodwa-ke, i-premium ye-VPN ingabiza, kanti i-VPN yamahhala ayilutho. Ngakho-ke, yini ongayenza?
Isikhathi sokuthuthukisa ubumfihlo bakho nokuphepha kwe-inthanethi ngokusebenzisa i-VPN ethembeke kakhulu! INord VPN ikulungele ukukuyenga ngamanani ayo akhethekile nokunikezwa kwalokhu Ulwesihlanu olumnyama futhi mhlawumbe ngoMsombuluko we-cyber!
Kungani kufanele usebenzise i-VPN? Ngabe uLwesihlanu Olumnyama ulufanele ngempela uNordvpn? Kungani kufanele ukhethe iNordvpn? Uma unayo yonke le mibuzo, funda phambili! Sikulethela izimpendulo eziphelele kanye nokunye okuningi!
Nakhu konke okufanele ukwazi ngokuthengiswa kwe-NordVPN emnyama ngoLwesihlanu.
I-Nord VPN ingumhlinzeki wesevisi ye-VPN yomhlaba wonke ngezinsizakalo ezincomekayo. Noma ngabe ufuna ukubhekabheka ngokuphepha noma usakaze okuqukethwe ngejubane elikhulu, kuyawenza umsebenzi! UNord ukholelwa ukuthi wonke umuntu kufanele abe nesipiliyoni se-inthanethi esivulekile kodwa esivikelekile nesizimele. Ngakho-ke, ochwepheshe baseNordVPN bebelokhu besebenza ngokungakhathali ukukulethela i-VPN enqenqemeni.
INord iyatholakala emazweni angaphezu kwama-59 anamaseva azungeze ama-5,400 + ongakhetha kuwo. Ihlala ilwela ukuletha izici zokusebenziseka kalula nezisheshayo zokuphepha okuhle kwe-cyber. Kodwa-ke, njengoba ingumhlinzeki wesevisi oyi-premium, ingabiza kancane. Yilapho ukuthengiswa kweBlack Friday kungakuzuzisa kakhulu.
I-VPN ehamba phambili yeNetflix - Sakaza ama-Movie angavinjelwe nemidlalo ye-TV
Yini eyenza iNord ibe ngumhlinzeki omkhulu we-VPN?
I-Nord VPN ingavikela idatha yakho ngokubethela okungenakuphikiswa kokuvikela okuqinile. Uma usebenzisa ukubhenka online noma uthenga online, kuba yinto ebalulekile kuwe ukusebenzisa isevisi ye-VPN.
Inikeza uhla lwezici. Okubaluleke kakhulu, iNord yenza umgomo oqinile wokungena ngemvume. Ezweni lapho wonke umuntu esebenzisa idatha yakho yezikhangiso namasevisi avela eceleni, i-Nord ingaqeda ukukhishwa kwe-inthanethi. Akugcini nje kuphela kwabanye, kepha nakuNord uqobo.
INord iyahambisana endaweni yonke. Ngakho-ke, ungayifaka ku-Windows, Linux, Android, iOS noma kwi-MacOS. Ngisho nakuma-TV akho ahlakaniphile namanye amadivayisi wakamuva, ungathembela kuNord. Ukubhalisa okukodwa kukuvumela ukuthi uxhume kuze kufike kumadivayisi we-6 wokuvikelwa nganoma yisiphi isikhathi.
Inkinobho yokubulala okuzenzakalelayo, i-VPN ephindwe kabili, ukuvikelwa kokuvuza kwe-DNS, kanye neCyberSec, phakathi kwezinye izinto eziningi, yenza iNord ibe ngomunye wabahlinzeki bezinsizakalo ze-VPN.
Izinzuzo Zokusebenzisa i-Nord VPN:
Kunezinzuzo eziningi zokusebenzisa i-VPN, ikakhulukazi iNord VPN. Ake sikhulume ngezinye zezizathu ezinamandla kakhulu zokusetshenziswa kwangempela.
1. Vikela Imininingwane Yakho:
Ungahle uqaphele ukuthi i-Apple ne-Whatsapp zisebenzisa ukubethela kokuphela kokuphela kwezingxenyekazi zabo. Noma kunjalo, ayitholakali ngakho konke okunye, hhayi ngempela. I-Facebook nezinye izikhondlakhondla ze-Intanethi zifuna ukutshala imali nakwezokuphepha.
Uma wabelana ngemininingwane kaningi, kufaka phakathi izithombe namavidiyo, i-VPN ingakulethela ukuvikelwa okubethelwe. Kusho ukuthi noma yimuphi umhlaseli noma uhlelo lokusebenza angaba nesikhathi esinzima ukuthola idatha yakho ukuyigcina. Ngakho-ke, uthola ukuphepha okuhle kakhulu. Kubaluleke kakhulu uma wenza ushintsho lwemali.
2. Ayisekho Imikhawulo
Amanye amawebhusayithi, izinhlelo zokusebenza, nezingosi kuvinjelwe ngenxa yokukhiya kwesifunda. Uma izwe lakho livimbe iwebhusayithi ethile, umdlalo, uhlelo lokusebenza, noma ipulatifomu, ungayifinyelela nge-VPN. Okubaluleke nakakhulu, izinsizakalo zokusakaza ezifana ne-Amazon, i-Hulu, nezinye zivame ukuba nokuqukethwe okuqondene nesifunda. Ngokusebenzisa i-VPN, ungafinyelela kokuqukethwe komhlaba wonke ngaphandle kwezindleko ezingeziwe.
3. Hlala Ungaziwa
Ingxenye engcono kakhulu yokusebenzisa i-VPN ukuthi izokuhlunga ubunikazi bakho uma iqala ukusebenza. Ngamanye amagama, awukho umbhalo wedijithali owushiya ngemuva. Ergo, ungapheqa noma yini futhi wenze noma yini oyithandayo ngaphandle kokuthi ihlobane nawe. Njengoba iNord nayo ingazigcini izingodo, uhlala ungaziwa ku-inthanethi.
4. Vikela Ekuqapheni
Uzothola uzungu oluningi izinhloli zikahulumeni ekusetshenzisweni kwedatha yomuntu ngamunye. Ngamanye amagama, bayazi ukuthi wenzani. Bazi umlando wakho wokusesha nomsebenzi we-inthanethi. Kuthiwani uma konke kuyiqiniso? Ngakho-ke, uma ufisa ukuvikela ubumfihlo bakho, kufanele usebenzise i-NordVPN.
5. Uvalelise Kumaqembu Esithathu
Izinkampani ezifana ne-Facebook nezinye izinhlelo zokusebenza ezimbalwa azinakuthenjwa ukuvikela idatha yakho. Ngemuva kwakho konke, bayayithengisela abantu besithathu, bese uthola zonke lezo zikhangiso. Kwesinye isikhathi, kungaholela ekuvukeni okungaba khona. Ngakho-ke, ukusebenzisa iNordvpn kungaba yisinqumo esihle ukuzivikela kulezi zingcuphe.
Ukuthengiswa kwe-NordVpn Black Friday:
Ukuthengiswa kweBlack Friday kuvame ukukulethela izaphulelo ezinkulu kakhulu, ikakhulukazi kwezobuchwepheshe. Izwe ledijithali liyingxenye yezwe lobuchwepheshe. Ngakho-ke, i-NordVPN ubuchwepheshe ongabuthola ngesaphulelo esikhangayo. Ngonyaka owedlule, iphakethe leminyaka emithathu belinesivumelwano esibalulekile, kuze kufike ku-70% wephakethe leminyaka emithathu.
Ngokwengeziwe, i-Nord iphose ukubethela kwe-Nord mahhala kwiphakheji. Ngakho-ke lokho bekuyisivumelwano esikhulu kakhulu sokusindisa-iBlack Friday ibona izaphulelo ezisinda kakhulu embonini yezobuchwepheshe. Ngakho-ke, kungenzeka ukuthi uthole i-Nord VPN ekunikezeni okuheha kakhulu futhi okungabizi kakhulu kulo nyaka, futhi.
Ngakho-ke, uma ufuna ukuthembela ku-NORD VPN ngobumfihlo bakho, kufanele ubheke ukuthengiswa kwalo nyaka kweBlack Friday. Kungahle kube nomkhawulo, ngakho-ke qiniseka ukuthi ugcina amehlo akho ethe njo kulitshe ukuze uvune imivuzo!
Ungasithola Kanjani Isaphulelo?
Ukuphela kokufanele ukwenze ukugcina ubheka iwebhusayithi esemthethweni yeNord. Ungabhalisela iphephandaba ukuze uthole izibuyekezo ezingaguquguquki. Bazokhipha usuku lokudayiswa kweBlack Friday kungekudala. Lapho usulwazi usuku, ungavakashela iwebhusayithi esemthethweni yeNord bese wenza inqubo yokubhalisa.
INord isebenza amakhasimende ayo cishe iminyaka eyishumi. Uma ungakasithathi isinqumo sokuthenga i-Nord VPN, akufanele uphuthelwe ukuthengiswa kwalo nyaka kweBlack Friday kweNordVPN. Okubaluleke nakakhulu, kuyisipho esihle kakhulu sokuphepha kubantu obakhathalelayo. Ngakho-ke uma usuvele unokubhaliselwe, usengathola amadili angcono.
Isikhathi samaholide sisondele ekhoneni. Ukuqinisekisa ukuthi unokuvikeleka okuhle kwe-cyber, zitholele iNordvpn!
I-ExpressVPN Black Friday 2020
Sakaza ama-movie aku-inthanethi mahhala ngaphandle kokulanda
bukela imibukiso ye-tv online mahhala ingavinjelwe
imidlalo eku-inthanethi yamahhala engavinjelwe yizihlungi zesikole
ama-headphone amahle kakhulu wokubuka ama-movie kwi-laptop
imibukiso ye-tv online mahhala akukho ukubhalisa